MW CMC Iyo Mudane Kassa Oo Booqday Mashaariicda Waaji Iyo Harre - Cakaara News
MW CMC Iyo Mudane Kassa Oo Booqday Mashaariicda Waaji Iyo Harre
Jigjiga( Cakaaranews ) Talaado, 23ka February 2016, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliyaan wasiirka Wasaarada Arimaha Federaalka iyo Horumarinta Xoolo-dhaqatada mudane Kassa Tekleberhan iyo Afhayeenka Golaha Xildhibaanada ahna Gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq ayaa saaka booqasho kormeer iyo indha-indhayn isugu jirta kutagay Mashruuca Biyo-Xidheenka wayn ee dhismihiisu kasocdo qabalaha Waaji ee Degmada Jigjiga.
Sidoo kale madaxwaynaha iyo waftigii weheliyay ayaa booqashadoood kusoo kormeeray mashruuca wayn ee xanaanada iyo dhoofinta xoolaha nool ee dhismihiisu ka socdo qabalaha Harre ee dagmada Jigjiga.
Hadaba, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa bogaadiyay qaabdhismeedka mashaariicdan gabagabada kudhaw isagoo tilmaamo gaar ah siiyay hawl-wadeenada mashruuca Biyo xidheenka kuna booriyay in ay wakhti kooban kudhameeyaan iyadoo mas'uuliyiintii wehelisay ay aad ugu farxeen halka ay dhismaha mashaariicdani marayso iyo waliba waxtarka ay bulshada uyeelan doonaan xiliga ladhamaystiro.
Dhanka kalana, hawl-wadeenada mashaariicdan labada goobood fulintooda gacanta kuhaya ayaa balan qaaday inay mudo gaaban kusoo gabagabayn doonaan dhismaha mashaariicdan si bulshadu uga faaiidaysato iyagoo dardargalin doona qaab shaqeedkooda oo habeen iyo maalinba shaqayn doona.
Ugudanbayna madaxwaynaha iyo waftigii uu hogaaminayay ayaa xili ku aadan duhurkii kusoo laabtay xarunta deegaanka iyadoo Wasiirka Wasaarada Arimaha Federaalka iyo Horumarinta Xoolodhaqatada ee JDFI mudane kassa Tekleberhan nasasho qado ah kadib loosii dhaweeyay dhanka gagida diyaaradaha caalamiga ah ee Garaad Wiilwaal International Airport. Halkaas oo uu uga socdaalay dhanka xarunta Dalka ee Adhisababa.